Madzimai Anotambira neMufaro Makurukota eChidzimai
Amai Oppah Muchinguri Kashiri
Mamwe madzimai ari kupembedza kugadzwa kwakaitwa makurukota ehurumende pamabiko akaitwa nezuro kuState House muguta guru reHarare.
Mukuru webazi reWomen In Politics Support Unit, Wipsu, Amai Sakile Sifelani, vakati chiitiko ichi ndechekutanga kuti pagadzwe madzimai gumi nevatanhatu, kubva mumakurukota nevatevedzeri vavo makumi mana nemashanu.
Vakatiwo kugadzwa kwakaitwa madzimai aya kunoratidza kuti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Dambudzo Mnangagwa, vane chido chokusimudzira madzimai mune zvematongerwo enyika.
Amai Sifelani vakati vanotarisira kuti huwandu hwemadzimai huchanyanya kukwira nekufamba kwenguva zvichitevedza bumbiro remitemo yenyika rinoti panofanirwa kupihwa mikana yakaenzana pakati pevanhukadzi nevarume munezvetongerwo enyika nehurumende.
Amai Sifelani vakaendera mberi vachiti bato reWipsu rinogamuchira mapazi asina kumbenge akabatwa nemadzimai akaita serekudzivirirwa kwenyika iro rakapihwa Amai Oppah Muchinguri Kashiri naAmai Monica Mutsvangwa gurukota rezvekuburitswa kwemashoko.
Muhurukuro yavakaita nevatori venhau, Amai Muchinguri Kashiri vakataura kuti basa guru ravachanyanya kugadzirisa nderekuti Zimbabwe ive nerunyararo.
Amai Mutsvangwa vakatiwo vachashanda kugadzirisa chimiro cheZimbabwe kune dzimwe nyika.
Amai Mutsvangwa vakaendera mberi vachiti vachatarisawo mitemo inotadzisa kuti vatori venhau vashande vakasununguka.
Mumwe wemadzimai mashanu akasarudzwa kumiririra matunhu gumi enyika, Doctor Ellah Gwaradzimba, avo vari kumirira dunhu reManicaland vanoti vanofara nekusarudzwa kwavakaitwa vachiti madzimai akarangarirwa zvakanyanyisa.
Gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland East, Amai Apoloniah Munzverengi, vanotiwo vari kunzwa kusununguka kuti Zimbabwe yaane mutungamiri anoteererawo zvido zvemadzimai.
Mamwe madzimai akasarudzwa kuitwa makurukota ehurumende anosanganisira Muzvare Kirsty Coventry gurukota rezvemitambo netsika, uye mutevedzeri wavi Amai Yeukai Simbanegavi.
Amai Prisca Mupfumira vakasarudzwa kuva gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, Amai Sithembiso Nyoni, vakaitwa gurukota rezvemadzimai Amai Evelyn Ndlovu vakasarudzwa kuve gurukota muhofisi yemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaContantino Chiwenga.